အိမ်စာမျက်နှာ / ကောဆောထောချောနှင့် ပတ်သက်သော / BTFP / ကောထောပေါဆော်၏ တာဝန်ဝတ္တရား
လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် အရည်အသွေးကောင်းမွန်စွာနှင့် ပြောင်းလဲသွားသောအခြေအနေနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိစေရန် ကောထောပေါဆော်၏လုပ်ငန်းထောက်ပံ့ရန်အတွက် ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအဖွဲ့မှ လုပ်ငန်း၊ လှုပ်ရှားမှုနှင့် စီမံကိန်းများထောက်ပံ့ရန်အတွက် အမျှော်အမြင်များနှင့်တာဝန်မစ်ရှင်းများကို သတ်မှတ်ထားပြီး ကောထောပေါဆော်၏ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း အောင်မြင်ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းများ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ကျယ်ပြန့်သောအများအကျိုးအတွက် အသံလွှင့်လုပ်ငန်း၊ ရုပ်မြင်သံကြားလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ ပြည်သူလူထုများ တရားမျှတစွာနှင့်ပွင့်လင်းစွာအကျိုးအသုံးပြုနိူင်ရန်အတွက် တွန်းအားပေးခြင်းနှင့် ထောက်ပံခြင်းဖြစ်ခြင်း၊ ကျေးလက်လူထုများနှင့်လုပ်ငန်းရှင်များအား ခိုင်ခံ့မှုတည်ဆောက်ပေးခြင်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်မှုရှိသောစက်မှုလုပ်ငန်း စံချိန်အဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် တိုးမြှင့်ပေးခြင်းနှင့် အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွင် စံချိန်ရရှိစေရန်နှင့် ကျင့်ဝတ်ရှိစေရန် လူပုဂ္ဂိုလ်များကို ဖွံ့ဖြိုးရေးပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
၁. ပြည်သူလူထုများအား အသံလွှင့်လုပ်ငန်း၊ ရုပ်မြင်သံကြားလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း အပိုင်း ၀န်ဆောင်မှုများရရှိနိူင်ရန် ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ထောက်ပံ့ငွေစီမံခြင်း၊ သုတေသနပြုလုပ်ခြင်းဆက်သွယ်ရေး အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့် အသံလိုင်းအသုံးပြုခြင်းတက်နိူလော်ဂျီ၊ သတင်းအချက်အလက်တက်နိူလော်ဂျီ၊ မသန်စွမ်းသူ၊ အိုမင်းသူနှင့်ချို့တဲ့သူအတွက် ကူညီထောက်ပံ့တက်နိူလော်ဂျီနှင့် ဆက်သွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အဆက်မပြတ်စက်မှုလုပ်ငန်း သတင်းအချက်အလက်များအမှီ အသိပညာဖွံ့ဖြိုးခြင်း၊ အသံလွှင့်လုပ်ငန်း၊ ရုပ်မြင်သံကြားလုပ်ငန်း၊ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်တက်နိူလော်ဂျီအပိုင်း လူပုဂ္ဂိုလ်များ ဖွံ့ဖြိုးခြင်း၊ အသံလွှင့်လုပ်ငန်းနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အသံလွှင့်လုပ်ငန်း၊ ရုပ်မြင်သံကြားလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းအပိုင်း သုံးစွဲသူစောင့်ရှောက်ခြင်းဥပဒေအရ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ခြင်း၏ကျင့်ဝတ်ပိုင်း စံချိန်ပြုလုပ်သောတာဝန်ရှိသည့်အဖွဲ့အစည်းကို ထောက်ပံ့ခြင်း၊ နှင့် ကောဆောထောချောသို့ သုံးသပ်ရန်တင်ပြရာတွင် အဖိုးထိုက်တန်ဆုံးနှင့်အရည်အသွေးအကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်စေရန် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်သတင်းဖွံ့ဖြိုးရေး ရန်ပုံငွေ၏ဥပဒေအတိုင်း လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ထောက်ပံ့ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
၂. ကောဆောထောချောသို့ ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် စီမံခြင်းအပိုင်း အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနှင့် အကြံပြုခြင်း
၃. ရန်ပုံငွေစီမံခြင်း လက်ခံရရှိသော စီမံကိန်း ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်လိုက်လံစောင့်ကြည့်ခြင်း
၄. ကောဆောထောချောဌာန၏ အီလက်ထရောနစ်သတင်းမီဒီယာမှတဆင့် ပြည်သူများသိရှိစေရန် ရန်ပုံငွေစီမံခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း အချက်အလက်များကို ဖြန့်ဝေခြင်း
၅. အသုံးစရိတ်၊ စာရင်းအင်းပြုလုပ်ခြင်း၊ စာရင်းစံနစ်၊ ငွေကြေးပိုင်းတင်ပြချက်များ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် ပွင့်လင်းရိုးသားမှုစစ်ဆေးနိူင်စေရန်အတွက် ငွေကြေး စာရင်းအင်းများနှင့် ပတ်သက်သည်များကို စစ်ဆေးမှုရှိစေရန် ပြုလုပ်ပေးခြင်း
ဖနျတီးသူ - (25-05-2017 17:02:01)